लोकसेवा पास नभएर हैरान हुनुहुन्छ ? अपनाउनुस् यो विधि::Nepalese News Portal
लोकसेवा पास नभएर हैरान हुनुहुन्छ ? अपनाउनुस् यो विधि
काठमाडौँ । धेरै पढ्नेहरु पनि लोकसेवा परिक्षामा सफल हुन् नसकेर हैरान हुन्छन् । आफूले पढेको कुरा मिलाएर लेख्न नसक्दा लोकसेवाको परिक्षा दिनेमध्ये अधिकांस फेल हुने गर्छन् । त्यसो भए कसरि लेख्ने त ?
सबैभन्दा पहिला प्रश्नपत्र पाएपछि प्रश्नले के खोजिरहेको छ भन्ने प्रस्ट हुने । त्यसपछि प्रश्नले खोजेको विषयवस्तुको परिचय दिने । परिचयपछि मूलभूत विषयहरूलाई बुँदागत रूपमा लेख्ने । १० नम्बरको प्रश्न हो भने १५ देखि २० वटासम्म मुख्य बुँदा लेख्नुपर्छ ।
अन्तिममा सारांश लेख्ने । सारांश पढेपछि मात्र प्रश्नपत्र जाँच्नेले नम्बर दिने भएकाले सारांशमा गहन कुरा लेख्नुपर्छ । जुन सारांशले कापी जाँच्ने व्यक्तिको मनोविज्ञानमा सकारात्मक असर परोस् ।
धेरैपटक लोकसेवा दिएर पनि किन असफल भइन्छ ?
अनुभवका लागि लोकसेवा परीक्षा दिनेहरू सफल हुन सक्दैनन् । कतिपय विद्यार्थी लोकसेवालाई हाउगुजीको रूपमा लिन्छन् र परीक्षाको तयारीदेखि नै लोकसेवाको डरले थिचिन्छन् । लोकसेवा पास हुन धेरै गाह्रो छ, कडा प्रतिस्पर्धा हुन्छ, थोरै विद्यार्थी मात्र पास हुन्छन्, पास गर्न सक्दिनँ भन्ने सोच राख्दा विद्यार्थी पहिले नै हतोत्साहित हुन्छन् ।
दबाबमा पढ्दा सेलेबसअनुसार जति पढ्नुपर्ने हो, त्योभन्दा धेरै पढ्छन् । अनावश्यक कुरा पनि कण्ठ गरेर बस्छन् । किताब घोकेर हुँदैन । व्यावहारिक भएर प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ । घोकाइको ज्ञानले लोकसेवालाई काम गर्दैन । तर, पाठ्यक्रमअनुसार विषयवस्तुको गहिराइ बुझियो र परीक्षालाई सहज रूपमा लिइयो भने सफल हुन सकिन्छ ।